အမိုက်စား ဖက်ရှင်ပုံရိပ် လေးတွေ နဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင် - Zeekwat Hot News
အမိုက်စား ဖက်ရှင်ပုံရိပ် လေးတွေ နဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင်
July 9, 20190363
ပရိသတ်ကြီးရေ…မော်ဒယန် နဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဘေဘီမောင်ကို တော့ ပရိတ်တွေကို အထူးတလ ည် မိတ်ဆက် ပေးစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်နော် …. ပြည်ပြည့် ဖောင်းဖောင်း နဲ့ အရမ်းကို ချစ်စရာကော င်းနေတဲ့ သူမ ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ တော့ ကိုယ်ပိုင်ပရိသတ်လေတွေ နဲ့ အောင်မြင်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ေ ကာင်း တ
Photo Bunny Oo – Source : Baby Maung – Facebook
စ်ောယက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော် သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောင်ကြောင်း အလှလေးတွေ ကြောင့် ပုရိသေ တွကြားမှာ ရေပန်စားသလို မိန်းကလေးချင်လည်း ကြွေရလောက်တဲ့ ထိပ်တန်းမော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် တစ်ယောကလည်း
ဖြစ်ပါတယ်နော် သူမရဲ့ လတ် တလောအနုပညာ လှုပ်ရှား မှု ပုံရိပ်လေးတွေ ကတော့ အဖိတ်ခံ ပွဲလေးတွေကို အမိုက်စား ဖက်ရှင် ပုံရိပ်လေးတွေ နဲ့ တက်ရောက် ချီးမြှင့်ပေးလေ့ရှိပြီး သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတေတွကို လည်း သူမရဲ့ လူမှု
ကွန်ယက် တခုဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ် မှာ အမြဲတင်ဆက် ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး သူမရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှား မှု ပုံရိပ်ေ လးတွေပါ သူမရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေကို အမြဲ ချပြလေ့ရှိသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော် အခုတခါမှာ ဆိုရင်လည်း သူမရဲ့  အလှ ပုံရိပ်လေးတွေ နဲ့ တင်ဆက်ပေးထားတာကို ဇီးကွက် ပရိသတ်တွေ အတွက်လည်း ပြန်လည်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါရေ
စနာ် ပရိသတ်တွေကလည်း ဘေဘီလေးကို ချစ်ရင် အသဲလေးတွေပါ ပေးခဲ့နော်………။ အနုပညာ ရှင်တွေရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှား မှု ပုံရိပ် လေးတွေကို သိရှိခံစားနိုင် အောင်လို့ ဇီးကွက် Page လေးကို Like လေး လုပ်ထား ဖို့ ပြောခဲ့ပါရစေနော်.….…။
အမိုကျစား ဖကျရှငျပုံရိပျ လေးတှေ နဲ့ ပှဲတကျခဲ့တဲ့ သရုပျဆောငျ ဘဘေီမောငျ
ပရိသတျကွီးရေ…မျောဒယနျ နဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ဘဘေီမောငျကို တော့ ပရိတျတှကေို အထူးတလညျ မိတျဆကျ ပေးစရာ မလိုတော့ဘူး ထငျပါတယျနျော …. ပွညျပွညျ့ ဖောငျးဖောငျး နဲ့ အရမျးကို ခဈြစရာကောငျးနတေဲ့ သူမ ကတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ တော့ ကိုယျပိုငျပရိသတျလတှေေ နဲ့ အောငျမွငျလာတဲ့ သရုပျဆောငျကောငျး တဈောယကျလညျး ဖွဈပါတယျနျော သူမရဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျ ကောငျကွောငျး အလှလေးတှေ ကွောငျ့ ပုရိသတှကွေားမှာ ရပေနျစားသလို မိနျးကလေးခငျြလညျး ကွှရေလောကျတဲ့ ထိပျတနျးမျောဒယျ သရုပျဆောငျ တဈယောကလညျး ဖွဈပါတယျနျော သူမရဲ့ လတျ တလောအနုပညာ လှုပျရှား မှု ပုံရိပျလေးတှေ ကတော့ အဖိတျခံ ပှဲလေးတှကေို အမိုကျစား ဖကျရှငျ ပုံရိပျလေးတှေ နဲ့ တကျရောကျ ခြီးမွှငျ့ပေးလရှေိ့ပွီး သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးတတှေကို လညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ တခုဖွဈတဲ့ သူမရဲ့ Facebook စာမကျြနှာပျေါ မှာ အမွဲတငျဆကျ ဖျောပွလရှေိ့ပွီး သူမရဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှား မှု ပုံရိပျလေးတှပေါ သူမရဲ့ ခဈြပရိသတျတှကေို အမွဲ ခပြွလရှေိ့သူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျနျော အခုတခါမှာ ဆိုရငျလညျး သူမရဲ့ အလှ ပုံရိပျလေးတှေ နဲ့ တငျဆကျပေးထားတာကို ဇီးကှကျ ပရိသတျတှေ အတှကျလညျး ပွနျလညျလို့ မြှဝပေေးလိုကျပါရစနျော ပရိသတျတှကေလညျး ဘဘေီလေးကို ခဈြရငျ အသဲလေးတှပေါ ပေးခဲ့နျော………။ အနုပညာ ရှငျတှရေဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှား မှု ပုံရိပျ လေးတှကေို သိရှိခံစားနိုငျ အောငျလို့ ဇီးကှကျ Page လေးကို Like လေး လုပျထား ဖို့ ပွောခဲ့ပါရစနေျော.….…။
မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ သမီးလေးနဲ့တွေ့ရတော့မယ့် စန္ဒီမြင့်လွင်